Tag: MUQDISHO | Sagal Radio Services
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre oo goordhow soo saaray War Saxaafadeed ayaa sheegay inuu ka xun yahay hadal shalay uu ka jeediyay magaalada Jowhar, oo ahaa inuu fashilmay Imtixaanka maamulka Puntland.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku ansixiyay heshiiskii Baydhabo oo Guddiga Kheyraadka ee Golaha maanta hor keeneen.
Sagal Radio Services • News Report • May 15, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade) inuu noqdo Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Imisa Agaasime ayaa soo martay Madaxtooyada Villa Somalia 2-dii sano ee la soo dhaafay ?
Madaxtooyada Villa Somalia ayaa labadii sano ee la soo dhaafay aheyd meel aan lagu negaanoo marba Agaasime la bedelayay inta uu Xafiiska joogo Madaxweyne Farmaajo.
Ciidamada Booliska oo gacanta ku dhigay nin bambo ku tuuray Xarun ciidan
Sagal Radio Services • News Report • May 11, 2019
Ciidamada Booliska ayaa goor dhow gacanta ku dhigay nin bambo gacmeed ku tuuray goob ay ku sugnaayeen Ciidamada oo ku taala degmada Yaaqshiid.
Booliska Soomaaliya oo ka hadlay dil iyo qarax macmal oo ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 10, 2019
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa bac lagu qariyay walxo baaruud qaraxda iyo dil rag burcad ah ay caawa ka dhacday xaafado kamid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir, xilli dadku ay ahaayeen kuwo Afurayay.
Ciidamada Booliska oo gacanta ku dhigay Askarigii dilay darawalki Mooto bajaaj
Sagal Radio Services • News Report • May 8, 2019
Taliye Kuxigeenka Ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in Ciidamada Booliska ay soo xireen askari boolis ah, kaasoo saaka degmada Hodan ku dilay Wiil dhalinyaro ah oo watay Mooto Bajaaj.
Maxamed Cabdi Maareeye oo markii 3aad la wareegay xilka Wasiirka Warfaafinta
Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maanta xilka kala wareegay Wasiirki hore Daahir Maxamuud Geelle.
Sawirro: Xafladda Daah Furka Xisbiga Himilo Qaran (Shariif, Xasan Sheekh iyo Jawaari…)
Waxaa xilligan ka socota Hoolka Sahal ee ku yaalla agagaarka Isgoyska KM4 Xaflada Daah furka Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd Shariif Sheekh Axmed.
Wasiirro Muqdisho ku soo dhaweeyay Shariif Sheekh Axmed
Sagal Radio Services • News Report • April 25, 2019
DAAWO: Madaxweyne Farmaajo “Waxaa na heysta faragelin shisheeye iyo in Beesha Caalamka nagula dacweeyo”
Sagal Radio Services • News Report • April 21, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in dhibaatooyinka dalka ka jira ay ka mid tahay dhaqan xumo siyaasadeed, isagoo ka dhawaajiyay inaan la kala garaneyn mucaarad iyo waxa loo yaqaano dumin.
Maamulka G/Banaadir oo ku wareejiyay Muwaadin gurigiisa muddo 30 sano xoog looga deganaa
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa gurigiisa ku wareejiyay Muwaadin lagu magacaabo Aweys Xaaji Muriidi, kaasoo gurigiisa oo ku yaal degmada Shingaani si xoog ah looga deganaa muddo 30 sano.
Shirkii Golaha Amniga Qaranka oo mar kale dib u dhac ku yimid [Maamul goboleedyada oo aan ka soo jawaabin…]
Sagal Radio Services • News Report • April 19, 2019
Shirka Golaha Amniga Qaranka ee Madaxda dowladda Federaalka iyo Madaxda dowlad goboleedyada oo lagu waday in maanta oo 19 April ka furmo magaalada Muqdisho ayaa mar kale dib u dhac ku yimid.
Daawo: Wasiir Ducaale “Ma aqbaleyno banaan baxyada Facebook laga abaabulayo”
Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow `ayaa sheegay in dowlada aysan aqbalaynin banaanbaxyada laga soo abaabulo baraha bulshada sida Facebook.
Fahad Yaasiin oo ku hanjabay inuu dacwad ka gudbinayo Xildhibaan su’aal kulul weydiiyay
Sagal Radio Services • News Report • April 14, 2019
Golaha Shacabka oo maanta yeelanaya Kulankii Amniga ee Todobaadki hore buuqa ku dhamaaday
Sagal Radio Services • News Report • April 13, 2019
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah yeelanaya kulankii Amniga ee todobaad ka hor ku dhamaaday buuqa iyo fowdada, kaddib muran ka dhashay in warbaahinta dibadda looga saaro kulanka.
Ciidamo ka tirsan Booliska iyo Militariga Soomaaliya oo ku dagaalamay Degmada Shibis
Sagal Radio Services • News Report • April 12, 2019
Dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidamo ka tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhexeysa Isgoyska maana booliyo iyo Beexaani ee magaalada Muqdisho.
Eng. Yariisow oo cabasho ku saabsan faya-dhowrka Caasimadda u diray Hay’adaha Caalamiga ee ku sugan Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 10, 2019
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa qoraal uu u diray Xafiisyada Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ee Muqdisho, waxa uu si kulul ugu cambaareeyey falalka ka dhanka ah faya dhawrka iyo badbaadada deegaanka oo Xafiisyadaas ay kula kaceen xeebaha Muqdisho.
Sawirro: Ciidamada Amniga oo howlgal ku soo qabtay Miinooyin, Bambooyin iyo bastoolado
Ciidamada Amniga ayaa caawa howlgal qorsheysan ku galay guri ku yaalla deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho, halkaasoo lagu soo qabtay waxyaabaha qarxa, bambooyin iyo bastoolado.
Madaxa Aamin Ambulance “Booliska waxay nagu wargeliyeen inaan joojino shaqada”
Sagal Radio Services • News Report • April 9, 2019
Madaxa Gaadiidka Gurmadka degdega ee Aamin Ambulance Dr. C/qaadir C/raxmaan Xaaji Aadam ayaa xaqiijiyay in amar ka soo baxay Booliska Gobolka Banaadir lagu amray inay joojiyaan shaqada, taasoo uu ku tilmaamay arrin aan wanaagsaneyn.
Madaxweyne Farmaajo oo Madaxda Maamul Goboleedyada ku marti-qaaday shir bishan ka dhacaya Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 7, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa mar kale martiqaad u diray Madaxda Maamul Goboleedyada inay bishan isugu yimaadaan magaalada Muqdisho, si uu uga dhaco shir Golaha Amniga Qaranka.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo buuxiyay Wasiiro ka bannaanaa Xukuumaddiisa (Saddex Wasiir la magacaabay)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhow buuxiyay Wasiiro ka banaanaa Xukuumaddiisa, isagoo magacaabay saddex Wasiir.
Afar Xisbi oo war saxaafadeed ka soo saaray Xaalada amniga ee dalka iyo gadoodka Ciidamada
Sagal Radio Services • News Report • March 27, 2019
Xisbiyada siyaasadda sida UPD, Wadajir, Himilo Qaran iyo Ilays ayaa war saxaafadeed wadajir ka soo saaray xaalada amniga ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay sii xumaaneysay xaaladeeda amniga.
Qarax khasaare dhimasho sababay oo goor dhaw ka dhacay magaalada Muqdisho
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya nooca qaraxan uu ahaa hasse ahaatee goobta uu ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku dhawdahay maqaaxi lagu magacaabo Al-Nasir oo ku taala xaafada Labo Dhagax.
Xildhibaan dhaliilay qaabka loo furay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Federalka
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Federalka Soomaaliya ayaa dhaliilay qaabka loo furay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Federalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo furay Kalfadhiggii Shanaad ee Golaha Shacabka
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigga shanaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Shirkadda SKA oo ku wareejisay Dowlada Soomaaliya xogta macdanka ku jirta dalka
Sagal Radio Services • News Report • March 24, 2019
Muqdisho, Qaraxyo goordhow ka dhacay Xarumo Wasaaradeed
Sagal Radio Services • News Report • March 23, 2019
Qaraxyo gawaari loo adeegsaday ayaa goordhow ka dhacay dhismaha Xarumo Wasaaradeed oo ku yaala Isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho.
Wararkii ugu dambeeyay ciidamada gadoodsan ee ku sugan duleedka degmada Balcad
Sagal Radio Services • News Report • March 21, 2019
Wararka laga helayo ilo ku dhow dhow ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliyeed oo maalintii labaad ku jira gadood ay ku dhaqaaqeen ayaa sheegaya in kulamo ay la yeeshee wafdi ka kooban wasiiro iyo saraakiil ciidan ay isku afgaran waayeen in ay dib ugu laabtaan fariisamahooda.
Kusimaha Taliyaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ahna Taliye kuxieenka Fahad Yaasiin Xaaji Dahir ayaa maanta ka soo muuqday kulankii u horeeyay oo looga hadlayay ammaanka, kaasoo ay ka qeyb galeen Guddoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho, Taliyeyaasha Nabadsugida iyo Booliska Saaldhigyada Muqdisho.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo baaq degdeg ka soo saartay dagaallo ka dhacay Sh/Dhexe iyo G/galaduud
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Dib u heshiisiinta iyo Arrimaha Federaalka dowladda Soomaaliya ayaa baaq ka soo saartay dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud.
Madaxweynaha Jabuuti oo qudbad u jeedinaya maanta labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow ka soo degey garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyay. Wafdiga Madaxweynaha Jabuuti ayaa waxaa ka mid ah wasiiro,xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jabuuti iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay magaalo madaxda Uganda ee Kampala
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa galabta u ambabaxay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda.
Qabanqaabada Aaska Meydka Cabdiraxmaan Xoosh oo ka socota Muqdisho
Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda la keeno magaalada Muqdisho Meydka marxuum C/maan Xoosh Jibriil oo ahaa Wasiirkii hore ee Dastuurka Dowlada Federalka.
Saddex ruux oo siyaabo kala duwan loogu diley deegaano ka tirsan gobolka Sh/dhexe
Wararka ka imanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in 24kii saac ee la soo dhaafay 3 ruux siyaabo kala duwan loogu diley deegaanka Mukay-Dheere iyo Ceel-Macaan ee gobolka Sh/dhexe.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo safarkiisa Kismaayo u baajiyay aaska Wasiirkii Dastuurka
Sagal Radio Services • News Report • March 9, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa baajiyay safar lagu waday in maanta oo Sabti ah ku tago magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee Jubbaland, kaddib geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Wasiirkii Dastuurka Xukuumadda Marxuum C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Qarax xooggan oo caawa ka dhacay Guri ku yaalla Muqdisho iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya
Qarax xooggan ayaa caawa laga maqlay guri ku yaalla degmada H/wadaag, iyadoo jugta qaraxa si weyn looga maqlayay inta badan magaalada Muqdisho.
Xisbiga Wadajir oo ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Wasiirkii Dastuurka Dowlada Federalka
Sagal Radio Services • News Report • March 8, 2019
Xisbiga Wadajir oo kamid ah xisbiyada dalka ka dhisan ayaa ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta lahayd eek u timid Allaha u naxariistee Wasiirkii Dastuurka Dowlada Federalka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Sagal Radio Services • News Report • February 28, 2019
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigii uu hoggaaminayey ee Booqashada shaqo ku joogay magaaladda Doha ee dalka Qatar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay.
AMISOM oo si rasmi ah u wareejisay xarunta Kulliyadii Jaalle Siyaad
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo maanta ka qayb galay munaasab ciidanka xoogga dalku ay ciidamada nabad ilaalinta midawga Afrika AMISO kala wareegayeen xarunta Tababarka Meleteriga ee Jaalla Siyaad, ayaa sheegay in dawladdu ay tillaabo wax ku ool ah u qaaday qorshaha ay kula wareegayso mas’uuliyadda amniga dalka.
Faahfaahin ka soo baxaysa qaraxyo ka dhacay caawa magaalada Muqdisho
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan qarax caawa qarax ka dhacay Laamiga Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho gaar ahaan goobo ay ku yaalaan Huteelo iyo xarumo kale oo ganacsi.
Xaalada magaalada Muqdisho oo caawa kacsan iyo rasaas laga maqlayo waddada Maka-Al-Mukarama
Wasiirka Amniga oo lagu wareejiyay warbixin ku saabsan tirada guud ee Ciidamada Soomaaliya
Koox ka socotay AMISOM oo qiimeyn ku sameeysay Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warbixin ku saabsan tirada Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo suura galnimada inay la wareegi karaan amniga guud ee dalka, marka ay isaga baxaan AMISOM.
Shir looga hadlayo Dhismaha Dowlaha Hoose oo Muqdisho ka furmay
Sagal Radio Services • News Report • February 26, 2019
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa furay Shirka Wadajir ee Hannaanka Qaran ee Dowladdaha Hoose oo ay ka Qeyb galayaan Wasiirada Arimaha Gudaha iyo dib u heshiista Dowlad goboleedyada iyo Maamulka gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay Dalka Qatar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhaw u ambabaxay magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo ay uga bilaabanayso booqasho shaqo oo labo maalmood ah.
Mid ka mid ah Xabsiyada ugu ballaaran qaarada Africa oo maanta xariga laga jarayo magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 23, 2019
Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in xariga laga jaro mid ka mid ah xabsiyada ugu ballaaran qaaradda Africa.
Safiirka cusub ee Ingiriiska u soo magacaabay Soomaaliya oo soo gaaray Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 22, 2019
Safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska u soo magacawday Soomaaliya Ben Fender OBE ayaa si rasmi ah uga shaqa bilaabay magaalada Muqdisho, kaddib markii uu todobaadkan soo gaaray caasimadda dalka.
Dowladda Soomaaliya oo saraakiil u xirtay tacaddi loo geystay suxufiyiin Soomaaliyeed
War ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya taliyaha ururka 60-aad ayaa ku wargaliyay wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geelle in Saddex Sarkaal ay u xiran yihiin tacaddi lagula kacay wariyeyaal Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayey ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu booqasho ku tegey dalalka Burundi iyo Jabuuti.
Akhriso: Dowladda Soomaaliya oo war saxaafadeed ku qornaa afka Soomaali ugu jawaabtay Kenya
Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ku qornaa afka Soomaaliga ka soo saartay xiisada siyaasadeed ee Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo war saxaafadeedkan uu ka duwan yahay warqad Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya u qortay dhiggeeda Kenya, kaasoo afka Ingiriiska ku qornaa.
Mahad Salaad “Siyaasadda waa ku kala aragti duwanaan karnaa, laakiin difaaca dalka waa muqadas”
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in siyaasadda lagu kala aragti duwanaan karo, balse difaaca dalka uu yahay muqadas, isagoo farriin u diray Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Safiirkii Soomaaliya ee Kenya Amb. Tarsan oo saaka ka soo degay garoonka Muqdisho
Safiirkii Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa saaka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kaddib markii dowladda Kenya ay ku amartay inuu degdeg uga baxo dalkeeda.
Agaasime kuxigeenkii 6aad oo ay yeelatay Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddaha [Akhriso]
Sagal Radio Services • News Report • February 15, 2019
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa magacaabay Agaasime kuxigeen cusub oo ay yeelaneyso Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda.
Taliska Booliska oo war ka soo saaray dilal ay Ciidamo ka tirsan Booliska ka geysteen Muqdisho
Taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jen. C/llaahi Xasan Bariise oo sidoo kale ah Madaxa Xafiiska Warbaahinta ee Ciidanka booliska ayaa ka hadlay toogasho Todobaadkii hore ay Muqdisho ka geysteen Ciidanka booliska.
Horukac mise Gadaal u gurasho: labo sano kaddib doorashada Madaxweyne FarmaajoLaba Gu’ ayaa u gaba-gabowday Dawladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ee talada dalka ku guulaysatay 8-Febraayo 2017, qammaamiir tirobeel ah ayaa ku rajo weynaa guul in uu soo hoyo geeddigan horta leh ee berigaas la doortay, goor musuqa iyo amni xumadu ahaayeen labada arrin ee Musharrax walba ajandihiisa ugu horraysiinayay.
Mahad Salaad oo maqaal ka qoray 2 sano kaddib Balanqaadkii Madaxweyne Farmaajo iyo mahadhooyinki laga dhaxlay
Sagal Radio Services • News Report • February 7, 2019
Tartankii loo galay xilka madaxtinnimada Soomaaliya 8 Feberaayo 2017 waxaa ku guuleystay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Intii lagu jiray ololaha doorashada wuxuu sheegay in ay ka go’an tahay in uu dalka ka hirgeliyo isbeddel siyaasadeed, mid amni iyo mid maamul intaba.
Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray Shir sanadeedka Garsoorka
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta ka qayb galay xiritaanka Shir Sanadeedka Garsoorka Soomaaliya oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho.
Shir u dhaxeeyay Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Dastuurka oo maanta ka furmay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 3, 2019
Waxaa magaalada Muqdisho ka furmay kulan-howleed u dhaxeeya Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Guddiga La-socodka Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka iyo Guddiga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka kaasoo socon doona muddo afar maalin ah.
Madaxweyne Farmaajo oo Qaramada Midoobey uga mahad celiyay taageeradeeda Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • January 31, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso u qaabbilsanaha Arrimaha Siyaasadda iyo nabadeynta ee xafiiska xoghaya Qaramada Midoobey Marwo Rosemary A. DiCarlo.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel aan ka fogeyn taallada Daljirka Dahsoon degmada Boodheere ee magaalada Muqdisho
Qarax lagu weeraray gaari ay saarnaayeen Injineero Soomaaliya iyo Ajnabi isugu jiray
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax lagu weeraray gaari ay la socdeen Injineero isugu jira Soomaaliya iyo Ajnabi oo ku safrayay dulleedka magaalada Muqdisho.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ka jawaabay hadalkii Yoweri Museveni “Waa qof iska hadlay”
Dhaqtar Siiriyaan oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax lagula eegtay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • January 24, 2019
Waxaa goor dhow magaalada Muqdisho ku geeriyooday Dr. Muhanad Cali Axmed oo u dhashay dalka Siiriya, kaasoo 21-kii bishan uu dhaawac ka soo gaaray qarax lagula eegtay degmada Hodan ee bartamaha magaalada Muqdisho.
Dhakhaatiir ajaaniib ah ku dhaawacantay waxyaalaha qarxa oo loogu xirey baabuur
Saddex dhakhtar oo labo ka mid ah ay ahaayeen dhakhaatiir u dhalatay dalka Siiriya ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari ay saarnaayeen uu kula qarxay magaalada Muqdisho.
Buug laga qoray Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo maanta lagu soo bandhigay Muqdisho
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay Buug laga qoray Allaha u naxariistee Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka mid ahaa haldoorada Soomaaliyeed ee qeyb qaatay hirgelinta Afka Soomaaliga.
Sagal Radio Services • News Report • January 19, 2019
Ciidamada NISA ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Sarkaal ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab, kaddib howlgal maaliniamdii shalay ka fuliyeen magaalada Muqdisho.
Dil toogasho ah oo lagu xukumay Askari qof shacab ah ku dilay qori Dhashiike ah
Sagal Radio Services • News Report • January 12, 2019
Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka ayaa dil toogasho ku xukuntau labo xidigle Xoogga dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Kumbud), kaasoo si bareer ah dil ugu geystay Marxuum Dayax Iimaan Xasan 21-ka bishii September sanadkii 2018, dilkaasi oo ka dhacay agagaarka Seybiyaano degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho.
Shir loogaga hadlayo ka hortagga qaraxyada oo Muqdisho ka furmay
Madaxweyne Farmaajo iyo Antonio Guterres oo Qadka taleefoonka ku wadahadlay.
Sagal Radio Services • News Report • January 5, 2019
Afhayeenka labaad ee QM Farhan Haq, ayaa sheegay in xoghayaha guud ee QM Antonio Guterres, uu kalsooni buuxdo ku qabay Mr Haysom, uuna aad uga xunyahay go’aanka ay dowlada Soomaaliya ku ceyriday.
Dowladda Soomaaliya : Wakiilka Qaramada Midoobey dalka loogama baahna
Sagal Radio Services • News Report • December 31, 2018
Iyadoo shalay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyay Miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019, ayaa waxaa soo baxaya muran u dhaxeeya Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare oo ka mid ahaa meel marinta Miisaaniyadda in Aqalka Sare qeyb ka noqdo.
Sidee loo qoondeeyay Miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019
Golaha Shacabka ayaa shalay ansixiyay Miisaaniyadda Dowladdu ku shaqeyn doonto sannad 2019-ka oo berri ka bilaabanaya, kuna dhammaan doona 31 December.
Golaha Shacabka oo Ansixiyay Miisaaniyadda 2019 ee Dowladda.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa maanta Ansixiyay Miisaaniyadda sanadka cusub ee DFS ee 2019.
Shirweynaha Qaran ee Dhalinyarada Soomaaliyeed oo si rasmi ah Muqdisho uga furmay
Sagal Radio Services • News Report • December 27, 2018
Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka oo doortay Guddoon cusub (Akhriso)
Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta doortay Guddoon cusub, kaddib markii laga saaray xubnihii Guddoonka guddigaas.
Meel marinta Miisaaniyadda sanadka 2019 oo u xayiran is qabqabsiga ka jira Guddiga Maaliyadda
Sagal Radio Services • News Report • December 25, 2018
Muddo saddex todobaad ka badan ayay hakad ku jiraan kulamadii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka, iyadoo ay jirto hubaal la’aan ku aadan meel marinta Miisaaniyadda sanadka 2019 oo ay dhowaan soo ansixiyeen Golaha Wasiirada, una soo gudbiyeen Baarlamaanka, si uu kama dambeys u meel mariyo.
Dil toogasho oo lagu fuliyay ninkii Al-Shabaab u qaabilsanaa sahminta goobaha la qarxiyo ee Muqdisho
News Report • December 24, 2018
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogasho ku fulisay C/qaadir Abuukar Shaacir Maxamed, kaasoo loo heystay inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa qeybta qaraxyada iyo sahminta goobaha dadka isugu yimaadaan.
Shaqaale ka tirsan Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha diinta oo lagu dilay Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa maanta ku dilay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho shaqaale ka tirsan Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha oo booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyaan mas’uuliyiin kale ayaa xalay saqdii dhexe booqday qaar kamid ah isbitaaladii la dhigay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Wariye Cawil Daahir Salaad oo ku dhintay Qaraxyadii saakay ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • December 22, 2018
Qarax xoogan oo goor dhaw ka dhacay meel aan ka fogeyn Madaxtooyada Soomaaliya
Qaraxan oo ahaa mid xoogan oo inta badan laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa goor dhaw ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay Baydhabo iyo diyaar garowga doorashada Madaxweynaha
Sagal Radio Services • News Report • December 18, 2018
Qaban qaabo iyo diyaar garow xooggan ayaa loogu jira doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo lagu wado in maalinta berri ay dhacdo, iyadoo ammaanka magaalada Baydhabo si aad ah loo adkeeyay.
Sagal Radio Services • News Report • December 17, 2018
Guddi isku xilqaamay xalinta khilaafka Guddoonka Baarlamaanka ayaa sheegaya in is afgarad laga gaaray kala aragti duwanaanti ka dhex jirtay Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa kuxigeen.
Inta badan Waddooyinka Muqdisho oo saaka xiran iyo Ciidamo la soo dhoobay
Waxaa saaka xiran inta badan Waddooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo saaka dadka ku waabariisteen Ciidamo ku sugan waddooyinka oo meelo badan ka xiray.
Maxkamadda G/Banaadir oo go’aan ka soo saartay dacwad musuq musuq loo heystay Wasiir kuxigeen
Maxkamada Gobolka Banaadir ayaa go’aan ka soo saartay dacwad loo heysto Muqtaar Mahad Daa’uud oo ahaa Wasiir kuxigeenkii Arrimaha Dibadda ee shaqo joojinta lagu sameeyay, kaasoo dhowaan lagu soo eedeeyay inuu ku kacay arrimo la xiriira ku tagrifal Hantida Qaranka.
Sagal Radio Services • News Report • December 15, 2018
Guddoomiye Mursal “Wixii qalad ee ku saabsan qabashadii Mukhtaar Roobow waa lagula xisaabtamaya cida leh”
Sagal Radio Services • News Report • December 14, 2018
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay shaqaaqooyinkii maanta ka dhacay Baydhabo ee ka dhashay xariggii Mukhtaar Roobow oo ka mid ahaa Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Wafdiga Madaxweynaha Eritrea oo xalay casho sharaf loogu sameeyay Hotel ku yaalla Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa Xalay Casha sharaf ugu sameeyay mid ka mid ah Hotelada Muqdisho Wafdiga Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo xalay ku hoyday magaalada.
Goodax “Mooshinka Madaxweynaha waa siyaasadeysan yahay, waxaa laga leeyahay saddex hadaf “
Wasiirrada Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa markii u horeeysay aamusnaanta ka baxay, iyagoo qaarkood bilaabay inay ka hadlaan mooshinka xil ka qaadista ee laga keenay Madaxweyne Farmaajo 9-kii bishan December.
Madaxweynaha Eritrea oo goor dhow ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal oo la sheegay inuu ka guuray Madaxtooyada
Sagal Radio Services • News Report • December 12, 2018
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal ayaa la sheegay inuu ka guuray Madaxtooyada, kaddib xayiraad saarneyd afar cisho, tan iyo markii uu qabtay Mooshinkii xil ka qaadista ee laga keenay Madaxweyne Farmaajo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii u horeysay hadal ka soo saaray Mooshinka xil ka qaadista ee ka dhanka ahaa Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo oo boggaadiyay sharci uu ansixiyay Aqalka Sare
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku boggaadiyey xildhibaannada Golaha Aqalka Sare ansixinta Sharciga Dhismaha Hay’adda Dadka Naafada ah.
Sagal Radio Services • News Report • December 11, 2018
Warar xogogaal ah ayaa sheegaya in madaxda dalalka Ethiopia Abiy Axmed iyo Eritrea Efewerki inay imanayaan caasimada dalka ee Muqdisho.
Xildhibaanada Mooshinka xil ka qaadista ka keenay Madaxweyne Farmaajo oo ku shiray Xarunta Villa Hargeysa ayaa baaq culus soo saaray.
Sagal Radio Services • News Report • November 28, 2018
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM Gen Thomas D. Waldhauser ayaa booqasho lama filaan ah shalay ku yimid magaalada Muqdisho, inkastoo booqashadaas aheyd mid qarsoodi ah oo aan la shaacin.
Sagal Radio Services • News Report • November 24, 2018
Hanti dhowraha guud ee Qaranka Maxamed Maxamuud Cali (Afgooye) ayaa qoraal jawaab ah ka soo saaray eedeyntii Guddiga Maaliyadda ee Golaha shacabka Baarlamaanka uu u jeediyay Wasaaradda maaliyadda iyo Hey’addaha dowladda inay ku kaceen wax is daba marin, maamul xumo iyo musuq maasuq lagu sameeyay miisaaniyadda dalka ee sanadkan, isla markaana dhaqaale fara badan ay maqan yihiin.
Sagal Radio Services • News Report • November 18, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kormeeray Dugsiga Tababarka Booliska ee Jen. Kaahiye, halkaasoo tababar uga socda ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya, kuwaasoo loo diyaarinayo sugida amniga Muqdisho.
Faah faahin ka soo baxaya qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Qarax miino ayaa maanta duhurkii ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, kaasoo lala eegtay gaari uu watay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Amniga dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga Xerada Xalane kaga guddoomay Safiirka Mareykanka
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirka cusub ee Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya Amb. Donald Yamamoto.
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo isku raacay dib u eegista Miisaaniyada dowladda
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda dalka ee 2018ka oo ay Qaraar u soo badaleen Guddiga Maaliyadda BFS.
Sagal Radio Services • News Report • November 10, 2018
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyadii shalay ruxay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 40 ruux, sida ay xaqiijinayaan ilo kala duwan oo madax banaan.
Shirka Kooxda Xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka oo maanta ka furmaya Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa inuu magaalada Muqdisho ka furmo Shirka Kooxda Xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka OIC, waxaa shirkan ka qeyb galaya illaa 15 dal oo xubin ka ah Kooxdan.
Ciidamada Amniga oo gacanta ku dhigay burcad dhac ka geysaneysay Suuqa Bakaaraha
Sagal Radio Services • News Report • October 24, 2018
Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir ayaa saaka gacanta ku dhigay kooxo burcad ah oo dhac ka geysanayay Suuqa Bakaaraha.
Xukuumadda Soomaaliya iyo Midawga Yurub ayaa maanta kala saxiixsay €100 milyan (Boqol milyan oo Yuuro) oo midowga Yurub si toos ah ugu taageerayo miisaaniyadda dawladda.
Mid ka mid ah raggii ka dambeeyay qaraxii Isgoyska Zoobe oo saaka la toogtay
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa saaka oo Axad ah waxay dil toogasho ku fulisay mid ka mid ah raggii wax ka abaabulay qaraxii ugu weynaa ka dhaca magaalada Muqdisho.
Gaari lagu soo xirey waxyaalaha qarxa oo ku qarxay Muqdisho
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhaawacmay gelinkii dambe ee maanta kadib markii gaari yar oo waxyaalaha qarxa lagu soo xirey uu ku qarxay agagaarka koontaroolkii hore ee Afgooye.
Machadka Heritage oo warbixin ka soo saaray Khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada
Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ayaa warbixin ka soo saaray khilaafka dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada oo xilligan gaaray heerkii ugu xumaa ee sababay inuu hakad galo wada shaqeyntii labada dhinac.
Fanaanad xalay ku geeryootay Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • October 6, 2018
Waxaa Xalay Magaalada Muqdisho ku geeryootay Fannaanadda Shamsa Xuseen Shumey oo ka mid aheyd Fannaaniinta Hoboladda Waabari.
Sawirro: Dhoolatuska iyo Bandhigga Daah Furka Xisbiga uu hoggaaminayo Xasan Sheekh
Sagal Radio Services • News Report • October 4, 2018
Munaasabadda Daah furka Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD) iyo caleema saarka Guddoomiyaha KMG ee Xisbigaas Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka socota Hoolka Sahal ee agagaarka Isgoyska KM4.
Xisbi uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh oo looga dhawaaqay Muqdisho (Akhriso)
Sagal Radio Services • News Report • September 30, 2018
Ciidamada NISA oo howlgal qorsheysan ku soo qabtay khabiir dhanka Qaraxyada oo ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa howl gal qorsheysan oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ay ku soo qabteen xubin ka tirsan Al-Shabaab.
Ciidamada NISA oo Muqdisho ku qabtay xubno ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab
Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxay ku qabteen xubno ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab.
Sagal Radio Services • News Report • September 9, 2018
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhiska iyo dayactirka dhismaha Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Dowlada Talyaaniga oo dib u dhiseysa Xarunta Maxkamada Sare ee dalka
Safiirka Talyaaniga ayaa sheegay in ay dib u dhis ku samaynayaan xarunta Maxkamadda sare ee dalka ee magaalada Muqdisho. kadib kulan maanta ay ka wada qaateen Guddoomiyaha Maxkamadda iyo Safiirka Talyaaniga.
Faahfaahino ka soo baxaya qarax lagu diley guddoomiye waaxeedka tirsan degmada Yaaqshiid
Sagal Radio Services • News Report • June 7, 2018
Waxaa soo baxaya faahfaahino qarax gelinkii dambe ee maanta lagula eegtay magaalada Muqdisho gaari uu la socday masuul ka tirsan maamulka degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Daah-furay Qorshaha Sugidda Amniga Muqdisho
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caawa daah-furay Qorshaha midaynta iyo Daadejinta Sugidda amniga Caasimadda Muqdisho, iyadoo mas’uuliyadda qorshahan looga fadhiyo maamulka Gobolka Banaadir iyo guddoomiyayaasha degmooyinka, kuwaasoo kaashanaya laamaha ammaanka.
Sagal Radio Services • News Report • May 12, 2018
Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerar madaafiic inay ku qaadeen saldhiga Milateri ee Turkiga ku tababaraan Ciidamada Soomaaliya ee ku yaalla deegaanka Jaziira ee magaalada Muqdisho.
Qarax labaad oo ka dhacay agagaarka Isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 6, 2018
Qarax labaad ayaa goor dhow ka dhacay agagaarka Daarta Sey Biyaano oo ku dhow Isgoyska Banaadir, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo.
Faah Faahin: Qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay agagaarka Isgoyska Sayidka ee Muqdisho
Qarax xooggan ayaa goor dhow laga maqlay magaalada Muqdisho, gaar ahaan nawaaxiga Isgoyska Sayidka oo ay bar koontarool ku leeyihiin Ciidamada Madaxtooyada.
Waddada gasha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo maalintii saddexaad xiran
Waxaa maalintii saddexaad xiran Waddada ka baxda KM4 ee gasha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaddib iska horimaad habeennimadii Jimcaha ku dhaxmaray halkaa ciidamo ka kala tirsan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya.
11 ruux oo ka mid ahaa Tahriibayaashii ku dhibanaa Liibiya oo saaka laga soo dejiyay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 17, 2018
11 ruux oo ka mid ahaa Tahriibayaashii Soomaaliyeed ee ku dhibanayaa dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ganacsatada Gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay shaqo joojin iyo Ganacsiga Suuqa Bakaaraha oo la xirayo
Shirka Golaha Wasiirada oo todobaadkii labaad baaqday (Akhriso)
Sagal Radio Services • News Report • February 15, 2018
Shirkii Golaha Wasiirada ee Khamiislaha oo saaka dhici lahaa ayaa baaqday, iyadoo warar kala duwan ka soo baxayaan dib u dhaca maanta ku yimid shirka oo ay ajandayaal dhowr ah looga hadli lahaa.
Shir looga hadlayo arrimaha socdaalka dalalka ku mideysan IGAD oo ka furmay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 11, 2018
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xafiiskiisa ku qaabilay Ergeyga Qaramada Midoobey
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kala hadlay Wakiilka gaarka ah ee Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating sidii xal waara loogu heli lahaa Barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho.
Hay'adda Socdaalka ee QM oo xafiis ka furatay Soomaaliya
Hay'adda Socdaalka ee QM ayaa sheegtay Jimcihii in ay xafiis ka furatay Dollow ee gobolka Gedo ee Soomaaliya iyada oo ka jawaabeysa barakac ballaaran oo ay sababeen abaaro iyo amni daro.
Taliye ka tirsan Ciidanka Badda Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • January 18, 2018
Taliye Boolis oo ka bad baaday qarax miino oo ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • January 16, 2018
Taliyaha Saldhigga Booliska degmada Dayniile Macalin Faarax ayaa maanta barqadii ka bad baaday qarax miino oo gaari uu la socday lagu sigay, kaasoo ka dhacay degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Daawo Sawirro: Madaxweynaha oo si rasmi ah xarigga uga jaray Xarunta Maamulka Hawada
Sagal Radio Services • News Report • December 28, 2017
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow xarigga ka jaray xarunta laga hagi doono Maamulka Hawada Soomaaliya oo markii u horeysay muddo 27 sano kaddib laga maamuli doono magaalada Muqdisho.
War deg deg ah-:Wariye Ka tirsan Telefishinka Kalsan oo u dhintay Qarax loogu xiray Gaari uu watay.
Sagal Radio Services • News Report • December 11, 2017
Alle ha u naxariistii waxaa goor-dhaw magaalada Muqdisho ku geeriyooday Wariye Maxamed Ibaarhim Gaabow oo ka tirsan Shaqaalaha Telefishinka kalsan Xarunta magaalada Muqdisho kadib qarax loogu xiray Gaari uu watay sida ay KNN u shageyn Wariyiyaal kale oo ka tirsan Kalsan TV.
Munaasabad lagu daah furayay Tartanka Ciyaaraha maamul goboleedyada oo la qabtay
Munaasabad lagu daah furayay Tartanka Ciyaaraha Kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa ka dhacay Garoonka Koonis Stadium, iyadoo ay ka qeyb galeen Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, Wasiirada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee dowlad goboleedyada, Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, iyo Guddiyo ay Wasaaradda Dhalinyarada u saartay howlaha Tartanka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti oo khudbad u jeediyay Xildhibaanada Golaha shacabka
Sagal Radio Services • News Report • November 25, 2017
Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ayaa maanta khudbad u jeediyay Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Jabuuti oo 1 malyan oo dollar ugu deeqday dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii Zobbe (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • November 20, 2017
Dowlada Jabuuti ayaa ku wareejisay deeq lacageed oo gaareysa hal malyan oo dollar gudiga qaran ee gurmadka iyadoo lacagtaana ay tahay mid lagu gargaarayo dadkii waxyeeeladu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay Muqdisho 14kii Oktoobar ee sanadkan.
Wasiirka Qorsheynta oo baarlamaanka hortagay
Sagal Radio Services • News Report • November 4, 2017
Wasiirka Wasaarada qorsheynta ee Xukuumada Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa Maata hortagay Xildhibaanada golaha Shacabka.
DEG DEG: Golaha Wasiirada oo xil ka qaadis ku sameeyay Taliyeyaasha Nabadsugida iyo Booliska
Shir aan caadi aheyn oo Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan aan caadi aheyn ayaa looga hadlay arrimaha amniga iyo gaar ahaan qaraxii shalay ay kooxaha argagaxisadu ka fuliyeen Hotel Naasahablood 2 ee magaalada Muqdisho.
Shirka u dhaxeeya Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo goordhow Muqdisho ka furmaya
Shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maanta oo Sabti ah ka furmaya magaalada Muqdisho, iyadoo shirkan diiradda lagu saari doono khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka oo la kulmay Taliyaha Tababarada Howl galka Midowga Yurub
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Jen. C/wali Jaamac Gorod ayaa xarunta wasaaradda Gaashaandhigga kula kulmay Taliyaha Tababarada howl galka Midowga Yurub ee Soomaaliua Addis Pietro.
Dibadbaxyo ka dhacay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka
Sagal Radio Services • News Report • October 19, 2017
Dibadbax ballaaran oo ay ka qeybgallayaan dadweyne isaga kala yimid xaafaddaha magaalada Muqdisho ayaa waqtigan ka soconaya magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa iclaamiyay banaan bax weyn oo maalinta berri ka dhici doona Garoonka kubadda cagta ee Koonis Stadium.
Xildhibaanada ku bahoobay Kudlada Horusocod ayaa markii u horeysay baaq ka soo saaray xaalada siyaasadeed iyo mida amni ee ka jirta dalka, iyadoo dowladda Soomaaliya u jeediyay tallooyin kala duwan.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo heshiis la saxiixday Hey’adda UNHCR
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta xarunta dowladda Hoose heshiis iskaashi kula saxiixday Wakiilka Hey’adda UNHCR u qaabilsan Soomaaliya.
Meydka wiil ay soo tuftay Badda oo saaka lagu arkay Xeebaha Muqdisho
Meydka Wiil yar oo aan qaan-gaarin ayaa saaka ay soo tuftay Badda, iyadoo lagu arkay Xeebaha Muqdisho.
Saldhigga Milateriga ee Turkiga ka dhistay Muqdisho oo maanta xarigga laga jarayo
Sagal Radio Services • News Report • September 30, 2017
Saldhigga Milateri ee uu Turkiga ka dhistay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah xarigga looga jaro, iyadoo munaasabad lagu furayo saldhigga ay ka qeyb galayaan Madaxda ugu sareysa dalka.
Shir looga hadlayo xasilinta dalka oo ka furmay magaalada Muqdisho Sawirro
Sagal Radio Services • News Report • September 25, 2017
Waxaa magaalada Muqdisho maanta ka furmy shirka bilaha ee xasilinta Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana shirkan daah furay oo shir guddoominayay wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dib-u-heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa.
Sagal Radio Services • News Report • September 23, 2017
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyay kulan looga hadlayay dib u eegista Arrimaha dastuurka dalka, kaasoo lagu wado in dhowaan loo soo bandhigo dadweynaha.
Guddoomiye Taabid oo ku guuleystay in la soo afjaro banaanbaxa bajaajleyda (Sawiro)
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta goob ay isugu soo bax darawaliinta bajaajta magaalada Muqdisho kula hadlay una muujiyey inuu garab taagan yahay dhallintaasi.
Imisa qof ayaa ku geeryootay saddexdii Qarax ee bishan June ka dhacay Muqdisho?
Sagal Radio Services • News Report • June 24, 2017
Saddex Qarax ayaa sagaal maalmood gudahooda ka dhacay magaalladda Muqdishu, oo intooda badan ay ku dhinteen dad shacab ah.
Madaxweyne Farmaajo oo xalay la kulmay Wafdiga Ahlusuna
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay la kulmay Hoggaamiyaha Ahlusuna Wal-jameeca Sheekh Maxamed Shaakir iyo Wafdigiisa ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Koox hubeysan oo caawa dilay sarkaal ka tirsan ciidanka Canshuurta qaada ee Minashiibiyada
Sagal Radio Services • News Report • March 10, 2017
Sarkaal ka tirsanaa ciidanka Canshuurta qaada ee loo yaqaano minashiibiyada, ayaa caawa lagu dilay degmadda, Dharkenleey, kadib markii gaarigiisa lagu hor gooyay gaari kale, kadibna rasaas lagu furay.
Sagal Radio Services • News Report • August 18, 2016
Bandhiga Carwada Buugaagta Muqdisho ayaa maalintii labaad galay, iyadoo qorayaasha martida ku ahaa bandhigan ay dadweynaha la wadaageen waxyaabaha ku kalifay buugaagta ay qoreen iyo waxa uu xambaarsan yahay.
Qarax xoogan oo ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho
Qarax xoog leh ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba oo ah meel aad u mashquulsan iyadoo qaraxana uu ahaa qarax ka dhashay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay.